မိခင်နို့အောင်မြင်စွာတိုက်ကျွေးရေး သိမှတ်ဖွယ်ရာပညာပေး (၂) | DatKhina Dipar
Specialist & Doctor
မိခင်နို့အောင်မြင်စွာတိုက်ကျွေးရေး သိမှတ်ဖွယ်ရာပညာပေး (၂)
By: punnami | Tags: | Comments:0| July 28th, 2014
– မွေးပြီး စောနိုင်သမျှစောစွာ နာရီဝက်/ တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့ကို စတင်တိုက်ကျွေးပါ။
– နေ့ရောညပါ ကလေးဆာတိုင်း မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးပါ။
– မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးသော ကလေးသည် မိခင်နို့မှ ရေဓါတ်အလုံအလောက် ရရှိပါသဖြင့် ပူအိုက်သော ရာသီတွင်ပင် ရေတိုက်ရန် မလိုပါ။
– မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်း စို့နေသောကလေး ရေလုံလောက်မှုရှိမရှိကို တစ်နေ့ အကြိမ်မည်မျှ ဆီးသွားသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ တစ်ရက် (၂၄)နာရီအတွင်း ဆီး(၆)ကြိမ်နှင့်အထက် သွားက ရေနှင့် အစာပါလုံလောက်ကြောင်း ပြဆိုပါသည်။
– မွေးစ အနည်းငယ်သာထွက်သော နို့ဦးရည်သည် ကလေး၏အာဟာရ လိုအပ်ချက် ကွက်တိဖြစ်ပါသဖြင့် မိခင်နို့မထွက်သေးဟု သုံးသပ်ကာ တခြားဖြည့်စွက်နို့များ တိုက်ကျွေးခြင်းမပြုသင့်ပါ။
– မွေးပြီး (၂)ရက်ခန့် ကြာလျှင် မိခင်နို့များ လှိုင်လှိုင်ထွက်လာမည်။ မိခင်နို့၏ သဘောသည် ကလေးစို့မှ များများထွက်သည်။
– ကလေးသည် အခြားနို့များ စို့ထား၍ ဗိုက်ပြည့်နေလျှင် မိခင်နို့ကို အစို့နည်းမည်။
– နို့စို့နည်းက နို့ထွက်နည်းမည်။
– ကလေးနှင့် (၃-၄)နာရီကြာ ခွဲခွါနေရလျှင် နို့ထွက်မကျဆင်းစေရန် ကလေးစို့သည့်အလား နို့များကို လက်ဖြင့် ညှစ်ထုတ်ပစ်ပါ။
– နို့ရည်လှိုင်လှိုင်မထွက်မီ မိခင်နို့စို့သည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် သားမြတ်နှစ်ဖက်လုံးကို စို့စေပါ။
– နို့ရည်လှိုင်လှိုင်ထွက်လာသောအခါ သားမြတ်တစ်ဖက်တည်းကို ကြာကြာစို့စေပါ။ သို့မှသာ ရှေးဦးထွက်လာသော နို့ရည်ကြဲ (အရည်နှင့်သကြားပါဝင်မှုများသည်) နှင့် နောက်မှလိုက်လာသော နို့ရည်ပြစ် (အဆီပါဝင်မှုများသည်) ကိုရရှိပါမည်။
-များသောအားဖြင့် သားမြတ်တစ်ဖက်တည်း စို့ရုံဖြင့် နို့ဝသွားတတ်ပါသည်။
မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာရှင်များအတွက် အထူးသတင်းကောင်း
အိန္ဓယနိုင်ငံ Fortis ဆေးရုံကြီးမှ နှလုံး၊အသည်း၊ကင်ဆာရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှ အခမဲ့ စစ်ဆေးကုသပေးခြင်း
ပလ၊ ပုလော၊ ပလောက်မြို့များတွင်းရှိသော ပရဟိတအသင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးခြင်း
(+95) 1 211315
No. 97(B), 2nd Floor (Left), Wardan Street,
Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
(+95) 59 41824 , Fax +95 59 42300
No. (42), Myay Ni Street, Kan Phyar Quarter, Myeik, Thanintharyi Region, Myanmar.
Datkhina Dipar Hospital was opened in 29th March, 2014 with the management of Datkhina Dipar Co., Ltd to provide the international standard health care. The hospital is located at No. 42, Myay Ni Street, Kan Phyar Quarter, Myeik Township, Myeik, Thanintharyi Region, Myanmar. It includes on5storeys MAIN building and Read More